एक वर्षमा कति गर्याे सर्वोच्चले मुद्दा फर्छ्याैट ? – Nepal Journal
एक वर्षमा कति गर्याे सर्वोच्चले मुद्दा फर्छ्याैट ?
Posted By: Nepal Journal April 15, 2018 | २ बैशाख २०७५, आईतवार २१:०५
काठमाडौँ, २ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले आजदेखि नियमित पत्रकार सम्मेलन शुरु गरेको छ । नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालतले नौ महिनामा आठ हजार ३२४ मुद्दा फर्छ्याैट गरेको विवरण सर्वाजनिक गरेको हो ।
आज अदालतमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अदालतका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पन्थीले साउनदेखि चैतसम्म आठ हजार ३२४ मुद्दा फर्छ्याैट गरेको बताए । सर्वोच्चले नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्य तालिकाअनुसार आज पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरेर मुद्दाको फर्छ्याैट विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
उनले गत वर्षभन्दा यो वर्ष मुद्दा फर्छ्याैट बढेको बताए । गत वर्ष २७ हजार ९२९ मुद्दामा २९.८ प्रतिशत मात्र मुद्दा फर्छ्याैट भएको उनले बताए ।
विसं २०७४ भन्दाअघि २१ हजार १७३ मुद्दा र विसं २०७४ मा छ हजार ७५६ मुद्दा सर्वोच्चमा परेका थिए । उनले अतिरिक्त समयमा न्यायाधीशले काम गरेको र एउटै प्रकृतिका मुद्दालाई एकै ठाउँमा ल्याएर सुनुवाइ गर्दा मुद्दा बढेको बताए ।
उनका अनुसार अझै १९ हजार ६०५ मुद्दा फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको छ । अदालतमा गत वर्ष दुई वर्ष नाघेका चार हजार ४३१ र पाँच वर्ष नाघेका एक हजार २२६ मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको छ, जसको प्रतिशत क्रममा ३३.९६ प्रतिशत र ३५.५४ प्रतिशत रहेको छ ।
अबदेखि सबै सञ्चार माध्यमलाई अदालतका न्याय सम्पादनबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले आइतबारदेखि बिहीबारसम्म साँझ ५ देखि ५ः३० बजेसम्म र शुक्रबार ३ः३० देखि ४ बजेसम्म पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएको छ । रासस
Be the first to comment on "एक वर्षमा कति गर्याे सर्वोच्चले मुद्दा फर्छ्याैट ?"